विज्ञानको माया | मझेरी डट कम
एस. एल. सी. परीक्षा आउँन मात्र दुई दिन बाकी थियो । अरूमा भन्दा पनि विज्ञान विषयमा नम्बर धेरै ल्याउनको निमित्त विद्यालय छुट्टी पछि ट्युसन पढ्नजाने सोचेर मनिषको बुबालाई ट्युसन पढाई दिन प्रस्ताव राखेकी थिएँ । वहाँले पनि पढाउन राजी हुनु भयो ।
अब विद्यालय सकिए पछि मनिषको बुबा मलाई ट्युसन पढाउन म बस्ने कोठामा आउन थाल्नु भयो । कक्षा ८ सम्म गाउँमा पढेर, आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन म गाउँबाट एकलाई आएर काठमाडौंमा डेरामा बस्न थालेकी थिएँ । मेरो काठमाडौंमा आफ्नो भन्नु कोही पनि थिएन । आफ्नो थियो त केबल विद्यालय, त्यही विद्यालयका साथीहरु र मनिषको बुबा मेरो विज्ञानको शिक्षक ।
मनिषको बुबालाई पनि मैले विज्ञानमा बढी भन्दा बढी नम्बर ल्याएको हेर्ने चाहना थियो । त्यसैले पनि मलाई पढाउन भने पछि वहाँ पनि एकदम रहर गर्नु हुन्थ्यो । समय बित्दै गयो । मनिषको बुबा मेरो डेरामा आएर पढाउन थाल्नु भएको पनि एक महिना बढी भइसकेको थियो ।
शुक्रबारको त्यो साँझ मलाई अलि सञ्चो थिएन । वहाँ आउनु भयो र सँधै झै मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्नु भयो । तर वहाँलाई मैले हाँसो फर्काउन भने सकिन । "के भो तिमीलाई" भनेर वहाँले मेरो निधारमा हात राखेर हेर्नु भो । त्यो वहाँले मलाई गर्नु भएको पहिलो स्पर्श थियो । त्यो भन्दा पहिले झुक्किएर पनि हामीले एक अर्कालाई स्पर्श गरेका थिएनौं । "ओहो कस्तो तातो निधार" भन्दै हात समाउनु भयो र "ओहो कस्तो तातो हात" पनि भन्नु भयो । त्यो वहाँको दोस्रो स्पर्श थियो । "जोरो छ जस्तो छ नि सिटामोल खाएनौं?" भनी सोध्नु भो । मैले टाउको हल्लाएर छैनको इशारा गरेकी थिएँ ।
केही नभनी उनी फन्नक फर्केर जानु भयो । कहाँ जानु भो,रिसाउनु भयोकी सोचेर म टोलाएर बसेकी थिएँ । एकै छिनमा हातमा सिटामोल लिएर आउनु भयो । मैले आँ गरे, सिटामोल एक चक्की मुखमा हालिदिनु भयो र गिलासमा पानी भरेर आफैले मलाई पानी खुवाउनु भयो । ट्युसन पढाउन आउनु भएको वहाँ त मलाई निधारमा पानीको पट्टी हाल्न थाल्नु भएको थियो । मलाई भित्र भित्रै लाज लाग्न थालीसकेको थियो । वहाँको त्यो हेरचाहले मेरो मनमा बेग्लै तरंग पैदा गर्न थालिसकेको थियो । मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेकि थिइन । आँखा भरी आँशु भरेर वहाँलाई मैले बेस्सरी अंगालोमा बेरे । दुबै जना केही बेर अँगालो हालेर नै बसेका थियौं । झसङ्ग भएर दुबै एकअर्का बाट अलगियौ । उनी जुरुक्क उठेर बाँकी औषधि त्यहाँ छ भन्दै खुरुखुरु जानु भो । म बिचराले केहि बोल्न सक्नु थिएन । लाजले वहाँलाई हेर्न पनि सकेकि थिइन ।
त्यस दिन देखि वहाँले विज्ञान विषय मात्रै नभएर अर्को एउटा विषय पनि पढाउन थाल्नु भयो। मायाको विषय । कतिखेर कसले कसलाई कसरी मन पराउन थालियो थाहा नै भएन । यो माया भन्ने चीज नै यस्तो रहेछ । हाम्रो सम्बन्ध झन् झन् गहिरो हुँदै गयो ।
आज म बिज्ञानको प्रोफेसर भएकी छु । अनि मनिषको बुबा मेरो जीवनसाथी र म वहाँको कान्छी श्रीमती । हामी सबै जना मिलेर बसेका छौ । मनिष मेरो छोरा भएको छ र उसको छोरा मेरी नाति । म बाट पनि एक सुपुत्रको जन्म भएर एक नातिनी पनि पाएकी छु । हामी सबै मनिषको बुबा, वहाँको जेठी श्रीमती, छोरा बुहारी, नाति नातिनी, सबै जना धेरै खुसी छन् ।
असम्भव केही छैन विज्ञान र मायामा
मेरो बिज्ञानको माया बन्यो मेरो मायाको कथा ।
प्रेम र प्राप्ति